Izimpendulo Zemibuzo Yesizathu Kungani Ukufakwa Kwegama Eliyisihluthulelo Kuholela Ekujezisweni Kwe-Panda
UJack Miller, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo yoMthengi Omkhulu, uzokutshela indlela yokugwema ukuhlawulwa yi-Google futhi ekugcineni uthole izikhundla eziphezulu ku-SERP.
Iwebhusayithi yami yahlawuliswa ngo-Agasti 2013 ekuvuseleleni kwedatha. Ngaleso sikhathi, kukhululwe izibuyekezo ze-Hummingbird, futhi ezinye izindawo ezimbalwa nazo zahlawuliswa. Kusukela ngaleso sikhathi, angikwazi ukuphinda ngibe nesimo ekusesheni kwe-Google. Ngabe sengilungiswa ngoNovemba 2013, kodwa angizange ngithole isaziso senzoga yogaxekile. Angikaze ngenzile ukwakha isixhumanisi futhi njalo ugxile ekubhaleni izihloko zekhwalithi - outil planification projet excel.
Ekuqaleni, angikwazi ukuqonda ukuthi kungani iwebhusayithi yami ihlawuliswa. Kamuva, ngazi ukuthi i-Google ikhombisa ingxenye yesigcawu samakhasi wami ngenkathi isebenzisa i-algorithms yayo yokusesha . Ngiye ngaba nokusetshenziswa okuphezulu kwamanye amagama angukhiye, futhi kungenzeka ukuthi igama elingukhiye lokugxila liholele i-Google ukuba ihlaziye iwebhusayithi yami.
Manje sekuye kwafakazelwa ukuthi igama elingukhiye eligxile ekugxilweni liholela ekujezisweni kwePanda, kodwa into eyinhloko okufanele uyikhumbule ukugxilwa kwegama elingukhiye noma ibinzana angeke kuthinte isayithi lakho. Kunalokho, ukugxilwa kwamagama angukhiye amaningi nemishwana kuyingozi kumakhasi akho wewebhu..Ngenkathi ubhala isihloko esithile, ungasebenzisa inombolo enkulu yamagama angukhiye nemishwana, ucabange ukuthi kufanelekile kuwebhusayithi yakho. Ngisho nokusetshenziswa ngokweqile kwamagama afanayo akulungile kuwebhusayithi yakho ngenkathi ukhuluma ngebhizinisi elithile noma umkhiqizo. Uma uphinda iphutha futhi wenza amagama angukhiye kuzo zonke izihloko zakho, ugibele i-tiger!
I-Google inezinkinga eziningi kumasayithi aphelele. Uma ibukeka kuwebhusayithi yakho futhi ithola ukuthi amagama ahlukene asetshenzisiwe ngokungenasici, angase angakunikezi isikhundla esihle. Amacala okugxila ngegama elingukhiye azofakwa kuwebhusayithi yakho. Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokugwema le nkinga ukubuka ubukhulu bamagama angukhiye ku-Google Index inketho yeThuluzi lakho leWebmaster. Kuzokunikeza ukuqonda ukuthi yimaphi amagama asetshenziswa ngokweqile nokuthi ungawagwema kanjani.
Ngokwesibonelo, uma usebenzisa igama elithi "ibhizinisi" kuwo wonke amakhasi akho, akufanele ukhohlwe ukuthi amawebhusayithi amaningi asebenzise leli gama kokuqukethwe kwawo. Ngakho-ke, i-Google izocabangela ukuthi uzama ukukhohlisa izinjini zokusesha futhi uzobeka izinhlawulo kuwebhusayithi yakho.
Ungakwazi ukusingatha uphinde uhlole okuqukethwe okugxilwe ngokuhlola i-URL nge-analyzer ye-keyword ye-SEOBook. Ngaphandle kwalokho, kufanele uthole ama-URL aphezulu namahle kakhulu egama elingukhiye ngokusebenzisa i-plugin.
Nginomuzwa wokuthi isibalo sezingu-3% noma ngaphezulu singakubangela izinkinga njengoba i-Google izocabangela ukuthi uhlanganisa amagama angukhiye nemishwana. Esikhundleni salokho, kufanele ugcine ukubaluleka kwegama elingukhiye kusuka ku-1% kuya ku-2.5%. Kuyafaneleka ngezinhloso ze-SEO futhi ngeke ubeke izinhlawulo kuwebhusayithi yakho.
Kuzo zonke izihloko obhalayo bese ushicilela, ukubaluleka kwegama elingukhiye kufanele kube ngu-2.2% ngegama elilodwa. Ngokuphelele, iwebhusayithi yakho kufanele ihlanganise nabasebenzisi ngokuqukethwe okufundisayo nokubhalwe kahle. Kuyoba kuhle uma abafundi banikezwa izinto eziwusizo zokufunda. Lokhu kuzogcina ekuthuthukiseni isipiliyoni somsebenzisi, okuholela ekujabuleleni ithrafikhi engaphezulu, amasheya amaningi, amazwana amaningi, kanye nezikhundla ezingcono.